Ithegi: yocingo | Martech Zone
Imithombo yeendaba yezeNtlalontle: Zeziphi ezona ziQonga zeMithombo yeendaba ziKhulu ngo-2020?
Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Ubungakanani bunomdla nokuba singathanda ukuyivuma okanye hayi. Ngelixa andingoyena mlandeli mkhulu kuninzi lwezi nethiwekhi, njengoko ndijonga unxibelelwano lwam-ezona ziqonga zikhulu kulapho ndichitha elona xesha lam. Ukuthandwa kuqhuba ukuthatha inxaxheba, kwaye xa ndifuna ukufikelela kwinethiwekhi yam esele ikho ngamaqonga athandwayo apho ndingafikelela khona. Qaphela ukuba ndithe ndikhona. Andinakuze ndicebise umthengi okanye umntu ukuba angayihoyi i-